डिजिटलमय बैंकिङ्ग क्षेत्र » Khabarbit
डिजिटल भन्ने शब्द डिजिटबाट प्रतिउत्पादन भएको हो जसको अर्थ अंक हो यानिकी पहिला इनपुट प्रदान गर्नुपर्छ त्यसपछि त्यो इनपुट प्रोसेस हुन्छ र अन्त्यमा फाइनल आउटपुट प्रदान गर्छ । इनपुट प्रयोगकर्ताले हाल्नुपर्छ, इनपुट भइसके पश्चात प्रोसेसिङ इनपुट बमोजिम अटो हुन्छ । जुन पहिलेनै तयार पार्नेले त्यसमा कोडिङ गरेर मिलाइसकेको हुन्छ र सोही बमोजिम प्रयोगकर्ताले आफ्नो आउटपुट प्राप्त गर्छ, जसलाई एउटा डिजिटल चक्र भनिन्छ । यो एउटा प्रविधि जडित प्रणली हो, जसले पुरातन प्रविधिलाई वा पुरातन तवरबाट हँुदै आएको कार्यलाई अपडेटेड बनाउदै लैजान सहज बनाउँछ ।
डिजिटलाइजेशन एउटा यस्तो निरन्तर भइरहने कार्य हो । जुन तेतीवेला मात्र रोकिन्छ, जब मानिसले सोच्न छाड्दछ । हिजोको आविष्कार आज अधुरो वा अपुरो लाग्छ, त्यस्तै आजका आविष्कार पक्कै भोलि अधुरो लाग्छन् त्यसकारण यो अनगोईङ प्रसोस हो । जसको पूर्णविराम मानिसले सोच्न छाडेपछि मात्र हुन्छ । अहिले यो यस्तो मेनस्ट्रिमको विषय बनेको छ जुन बिना कुनै पनि क्षेत्रको विकास एवंम् विस्तार हुन नसक्ने अवस्थामा छ । उत्पादन, वितरण, उपभोग तीनै चरणमा यसले आफ्नो कब्जा जमाइसकेको देखिन्छ ।
बैंकिङ्ग क्षेत्रमा यसको भूमिका
बैंकिङ्ग क्षेत्र एउटा नितान्त व्यवसायिक सेवा प्रदायक क्षेत्र भएकोले यसमा डिजिटलाइजेशनले ठूलो हिस्सा ओगटेको छ । बैंकहरुले आफ्नो ग्राहकहरुलाई गुणस्तरीय सेवा दिनु पहिलो प्राथमिकता भएकोले नेपालका सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु डिजिटलमय भइसकेका छन् । नयाँ–नयाँ प्रविधिलाई आत्मसाथ गर्दै अघि बढिरहेको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंक तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका नियामक निकायहरु पनि यो विषयमा अपडेटेड हुँदै गइरहेको महशुस गर्न सकिन्छ । डिजिटलाइजेशनको माध्यमबाट आफ्नो ग्राहकहरुलाई छिटो, छरितो, सहज, गुणस्तर सेवा दिन सकिन्छ भन्ने थाहा भएपछि हाल सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले यो माध्यमलाई सहस्त्र स्वीकारेका छन् । ग्राहकहरुले पनि यस्तो सेवाहरु रुचाएको पाइन्छ । बैंकले प्रदान गर्ने डिजिटल सेवा विशेषत दुई प्रकारका हुन्छन् :
पहिलो अनलाइन सेवा : यो सेवा अन्तर्गत प्रयोगकर्ता वा ग्राहकहरु इन्टरनेटको पहुँचमा रहनुपर्दछ । हाल नेपालमा कुल जनसंख्याको लगभग ४६ प्रतिशत मानिसले इन्टरनेट प्रयोग गर्दछन । यसले के देखाउँछ भने यो सेवालाई अझ विस्तार गरी बजार लिन सकिन्छ । यो सेवा प्राप्त गर्न ग्राहकलाई चाहिने आवश्यक वस्तु भनेको मोवाइल वा ल्यापटप र इन्टरनेट, यति भएपछि ग्राहकहरु सहझै आफु रहेकै स्थानमा यो सेवा प्रयोग गर्न सकिन्छ । अनलाइन सेवावाट ग्राहकहरुले खाता खोल्न, मोवाइल बैंकिङ्गका सम्पूर्ण सेवा, इन्टरनेट बैंकिङ्ग, मोवाइल वालेट, सेयर कारोवार जस्ता थुप्रै सेवाहरु प्राप्त गर्न सक्छन् ।
अहिलेको यो डिजिटल युगमा जो यसको रफ्तारमा वा जसले डिजिटलको स्पिड क्याच गर्न सक्दैन त्यसलाई असहज हुनु स्वभाविक हुनेछ । हाल नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रले जस्तो डिजिटल सेवा दिन सक्ने निकाय कमै भएता पनि विस्तारै सबै कार्यालय यहि ट्रयाकमा आउने बाहेकको विकल्प छैन
दोस्रो अफलाइन सेवा : यो सेवा उपभोग गर्न ग्राहकहरुसँग सिम कार्डसहितको मोवाइल भए पुग्छ । यो सेवा प्राप्त गर्न इन्टरनेट चाहिँदैन त्यसैले बैंकहरुले यो सेवा सबै ग्राहकरुलाई अनिवार्य जस्तै बनाइसकेका छन् । अफलाइन सेवाबाट मोवाइल बैंकिङ्गको अफलाइन सेवा मोडका सेवाहरु, मोवाइल वालेटको अफलाइन सेवा मोडका सेवाहरु, ए.टि.एम कार्डका सेवा आदि सेवाहरु प्राप्त गर्न सक्दछन् ।
डिजिटल बैंकिङ्गबाट हुने फाइदाहरु :
१. ग्राहकलाई फाइदाहरु :
– नगर बोक्दाका समस्याहरुवाट मुक्ति,
– बैंकमा पैसा निकाल्न वा राख्न लाईन बस्नु नपर्ने,
– समयको बचत,
– सरकारी कर, राजश्व आदि तिर्न दलाल हायर गर्नुपर्ने वा उक्त कार्यको झन्झटवाट छुटकारा,
– विभिन्न समयमा चल्ने छुट तथा अफरको लाभ लिन सकिने,
– घर वा अफिस बसि–बसी पेमेण्ट र डिपोजिट गर्न सकिने,
– नकक्ली वा जाली नोट, ठगी जस्ता बैमानीवाट सुरक्षित भइने,
२. बैंकलाई फाइदाहरु :
– आफ्नो ग्राहकहरुलाई सरल, छिटो र गुणस्तर सेवा दिन पाउनु,
– नगद रहित कारोवार बढ्दा बैंकमा भिडभाड कम हुनु,
– नगद व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुनु,
– डिजिटल सेवाहरुको बिक्रीबाट सेवा शुल्क तथा नवीकरण शुल्क वापत आम्दानी हुनु,
– डिजिटल नेटवर्क मजबुत हँुदै जाने,
– कारोवारको सुक्ष्म निगरानी गर्न सकिने,
– डिजिटल अफिसको अवधारणालाई मदत गर्ने,
३. राज्यलाई फाइदा :
– राज्यका नागरिकहरु डिजिटल सेवावाट सन्तुष्ट हुँदा, सरकारको सरोकारवाला पक्षहरुको यसमा चासो केन्द्रित हुनु,
– नगदरहित कारोवार बढ्दा, नोट कम छाप्ने जसकारण सरकारको वार्षिक उक्त कार्यमा हुने खर्चमा कम हुनु,
– चोरी, डकैती, लुटपाट जस्ता अपराधमा कमी हुने,
– सरकारले नियम संगत चाहेको वखत कुनै पनि कारोवारलाई सुक्ष्म अनुसन्धान गर्न पाउने,
– सरकारी कारोवारको सहज लेखाजोखा राख्न,
– डिजिटल मैत्री बजार विस्तार तथा प्रवर्दन गर्न,
डिजिटल सेवा वा डिजिटल बैंकिङ्गको अवसर र चुनौतीहरु
अवसर र चुनौती भनेको एकै सिक्काको दुई पाटा हुन्, जहाँ अवसर देखिन्छ त्यहाँ स्वत चुनौती लुकेको हुन्छ । नेपालमा प्रभावकारी तरिकाले डिजिटल सेवा प्रदान गर्न सुरु गर्ने नै बैंकिङ्ग क्षेत्र हो । त्तपश्चात हाल सबै क्षेत्र डिजिटल सेवा मोडमा जान तयार भइरहकेको पाइन्छ । बैंकिङ्ग क्षेत्रको कुरा गर्नु पर्दा डिजिटल सेवालाई अझ व्यापक, विस्तार, विश्वासनिय, सरल बनाउँदा यस क्षेत्रमा धेरै अवसर छ साथै क्षेत्रमा अवसर र चुनौती संगसंगै गाजिएर आउने भएको हुँदा चुनौती पनि अवश्य छ ।
– डिजिटल सेवा साक्षरता कार्यक्रम लागु गरी, ग्राहकहरुलाई यो सेवा प्रति आकर्शित गराउनु,
– बजारिकरणका लागि बजारमा गई प्रचारप्रसार गर्नु,
– सेवा शुल्क तथा नविकरण शुल्कलाई इकोनोमी बनाउनु,
– अफलाइन मोडका अन्य विशेषता जोडी यसलाई अझ विस्तार गर्न जरुरी,
– नुनदेखि सुनपसलसम्म यसको उपयोगिता भएको हुँदा व्यवसायमा केन्द्रित हुन आवश्यक,
– डिजिटल चोरी जसलाई ह्याक अथवा डिजिटल ह्याकिङको नामले प्रख्यात छ,
– पासवर्ड सेयर गर्दा हुनसक्ने जोखिम,
– निराक्षर मानिसलाई दुबिधा वा असहजको महशुश,
– इन्टरनेटको पहुँच बढाउनु पर्ने,
– डिजिटल सामाग्रीको व्यवसायिकीकरण,
– उचित लागत वा लागतको व्यवस्थापन,
– सर्भर, स्पिड जस्ता अयवयहरुको उचित प्रबन्ध मिलाउनु,
– भौगोलिक विकटता आदि
अन्त्यमा, अहिलेको यो डिजिटल युगमा जो यसको रफ्तारमा वा जसले डिजिटलको स्पिड क्याच गर्न सक्दैन त्यसलाई असहज हुनु स्वभाविक हुनेछ । हाल नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रले जस्तो डिजिटल सेवा दिन सक्ने निकाय कमै भएता पनि विस्तारै सबै कार्यालय यहि ट्रयाकमा आउने बाहेकको विकल्प छैन । किनेभने सेवा ग्राहीले यही सेवा रुचाइदिए । मानिसलाई फाइल समातेर बस्ने फुर्सद छैन । त्यसैकारण फाइल समातेर बस्नु पर्ने कार्यालयमा बिचौलियाको साथ लिइन्छन् । डिजिटल सेवा हुँदा अनियमितता शून्यमा झर्छ, काम छिटो छरितो हुन्छ, दुई सय रुपैयाँको काममा दुई हजार रुपैयाँ खर्च हुदैन । त्यसो हुँदा मानिसहरु आफै खुशी हुन्छन् ।
सेवा क्षेत्रमा मात्र हैन उत्पादन क्षेत्रमा प्रयोग हुने औजार, उपकरण डिजिटल प्रयोग हुनुपर्छ । डिजिटल दुनियाँमा थुप्रै नराम्ररा वा हानिकारक चिज छन् जसले मानिसलाई डिजिटल कुलतमा पार्न सक्छ । तर्सथ डिजिटल कुलतमा नलागि नवितम र सकरात्मक सोचका साथ डिजिटल संसार प्रवेश गर्न जरुरी देखिन्छ ।
Tags: अर्थडिजिटलबैंकिङ्ग क्षेत्रविचार
प्रकाशित मिति : २०७८ असार २३ गते, ११:३८ बजे
आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को बजेट वक्तव्य [LIVE]
प्रकाशित मिति : २०७८ जेष्ठ १५ गते, १८:२२ बजे